विश्व बातावरण दिवसको औचित्य
Home विशेष लेख विश्व बातावरण दिवसको औचित्य
के हो बिश्व बाताबरन दिवस ?
विश्व बातावरण दिवस सन १९७२ देखि मनाउदै आइएको अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रम हो । यसलाई प्रतेक बर्ष सयुक्त राष्ट्र संघद्वारा एउटा नाराको साथ आयोजना गरिन्छ । सन २०१२ मा 'हरित अर्थतन्त्र ' नारा लिएर यो कार्यक्रम बिश्वभरिनै मनाइदै छ । हरित अर्थतन्त्र भन्नाले बिकास निर्माणका कृयाकलापले पृथ्वीको बाताबरणलाई नकरात्मक असर पार्नु हुन्न भन्ने हो । बीगत बर्षहरुमा जैबिक बिबिधता, सफा पिउने पानि, मरुभुमिकरण, ओजोन अबछय इत्यादी नाराहरुको साथ मनाइदै आइएको थियो । बिभिन्न कार्यक्रमहरु समाबेस गरेर बर्षभरिनै विश्व बातावरण दिवस मनाइने भएता पनि यस बर्ष मङ्लबार ५ जुनको दिन मुख्य दिवसको रुपमा मनाइने घोषणा गरिएको छ ।
कसरी मनाइन्छ त बातावरण दिवस?
यस दिन एउटा ब्यक्ति देखि लिएर; परिवार; समुह; स्कुल; समाजिक, राजनैतिक तथा ब्यापारिक सङठनहरुले प्रकृतिसँग सम्बन्धित बिभिन्न बाताबरणिय वा पर्याबरणिय क्रियाकलापहरु आयोजना गरिन्छ । कारको सट्टा हिँडने वा साइकल चढने; नदि नाला, सामुन्द्रिक तट, गल्ली, पार्क सरसफाइ गर्ने; ब्रिछ्छ्या रोपण गर्ने; बाताबरणिय समस्याहरु र तीनलाई कसरी सुल्झाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा कथा, कबिता पढने तथा नाटक, चित्रकला पर्दसन इत्यादी गरेर बातावरण दिवस मनाइन्छ ।
बातावरण के हो र यसको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
प्राक्रितिक बातावरण भन्न साथै बायुमन्डल, प्रकास, जमिन र पानी भन्ने बुझ्नु पर्दछ जसको सहायताले मानवहरुको साथै बन्य-जन्तु र बोट-बिरुवाहरुको जिवन बाँचिरहेको हुन्छ । हामि मानव, प्राणीहरु मध्य सर्बोच्च प्राणी भएको हुनाले यस एउटा प्रिथ्विमा उपलब्ध प्राक्रितिक स्रोतलाई प्रयोग गर्ने क्रममा अतिक्रमण हुन गएको छ । हामिद्वारा यसको उपभोग आवसेक्ता भन्दा बढी भएको छ । प्रकृतिको नियम अनुसार मानवको सेवामा सधैं उपलब्ध यी स्रोतहरुको पुनर्जन्म स्वत: हुने गर्दछ । जस्तै हामिले पिउने पानी पंधेरामा आफै उम्रन्छ । हामिले खाने यैंसलु बनमा स्वत: फल्दछ । बनपाखामा गाउने कोइली र भिर-पाखामा चरने म्रिग आफै जन्मन्छन । र माटोलाई उर्बरा राख्ने गडेउला जमिनमुनी आफै सलबलाउन्छन । तर हामिले कदापी भुल्नु हुँदैन तिनीहरु छन त हामि मानवहरु छौं यस पृथ्वीमा भनेर । तर अहिलेको भौतिक युगमा हाम्रो अस्तित्वको लागि प्रकृतिको खाँचो पर्दछ भन्ने तत्थ्यलाई बिर्सिन खोजिएको छ । त्यसैले जानि नजानि प्रकृतिको यस्तो फाइदाजनक नियमलाई हाम्रै मानविय क्रियाकलापले असन्तुलित बनाएको छ । फल्सरुप जमिनबाट पिउने पानीको मुल फुट्न छोडेको छ । पृथ्वी अती तातिन गै हिमाल पग्लिने क्रम द्रुत हुन जाँदा माछापुछ्रेमा हिमपैरो गै सेतिमा असामयिक बाढी आएको छ । पहाडका पाटा र मधेसका गराको उर्बरा शक्ति घटेको छ । ताल र समुन्द्रका माछा अनी हाम्रा जङलका बाग र हात्तीको सङ्ख्या घटेका छन । हामिले प्युने पानी र फेर्ने हावा दुसित भएका छन ।
बिग्रदो बातावरनको कारण के त ?
यी सबै समस्याको मुख्या कारण पृथ्वीमा यसको छमताले धान्ने भन्दा बढी हामि मानिसहरु हुनु र आवसेक्ता भन्दा बढी प्राक्रितिक स्रोतको उपभोग गर्नुले हो । सन २०११ मा पृथ्वीको जनसंख्या ७ बिलिएन पुगेको छ । बिग्यहरुले भनेका छन संसारका यी सबै मानिसहरुले यदि बेलायतका मानिसहरुले झैँ सामानको उपभोग गर्थे भने हामिलाई ३ वटा पृथ्वी चाहिने थियो । तर हामिसँग त छ एउटा मात्रै पृथ्वी । त्यसो भए यदि हाम्रो उपभोगमा कटौती गरेन भने कसरी हाम्रा सन्ततीहरु यस एउटा पृथ्वीमा बाच्ने ? हामिले चलाउने कार र उध्योग-धन्दाबाट उत्सर्जन हुने कार्बनडाइ-अक्साइडले गर्दा हामि बस्ने पृथ्वी र वरिपरिको बायुमन्डल तात्दै गैरहेको छ । तर प्रकृतिले हामिलाई रुख बिरुवा दिएको छ जसले कार्बनडाइ-अक्साइडजस्तो ग्यासलाई लिएर मानिसलाई चाहिने अक्सिजन हावामा मिसाइदिन्छ । तर अभाग्यबस तिनै रुख बिरुवाहरुको बिनास द्रुत गतिमा भैरहेको छ । बढदो जनसंख्यालाई पाल्न क्रिसियोग्य जमिनको लागि, गाई-गोरु तथा भेडा चरणको लागि, अनी पाल्म तेल उत्पादनको लागि ब्राजिल र इन्डोनेसियाका रेन-फोरेस्टहरु जथाभावी फडानि भैरहेका छन । फल्सरुप जनावर तथा चराचुरुङी को बासस्थान नास र जैबिक बिबिधितामा ह्रास आइरहेको छ ।
बातावरणलाई कसरी सम्रछन गर्न सकिन्छ त ?
यसैले जरुरी छ तपाइ हामिले विश्व बातावरण दिवस मनाउन जसको मुख्य उद्देस्य मानिसहरुलाई यस समस्याको बारेमा सचेत गराइ उनिहरुको स्वार्थी बानिब्योहरामा परिवर्तन ल्याउनु हो । यसै उद्देस्य बोकेर मङ्लबार ५ जुन २०१२ को दिन बेलायतको दश्छिण-प्रुर्बी तटवर्तीय सहर फकस्टोनमा बस्ने नेपालीहरुले बातावरण सम्बन्धी हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता; नाटक मन्चन; लेख, निबन्ध, कथा, कबिता बाचन जस्ता क्रियाकलापहरु गरेर विश्व बातावरण दिवस मनाउने भएका छन । तपाईंहरूको सहभागिताको पनि अपेच्या गरिएको छ ।